Jaona 6: 66-71 "66 Hatramin’izany dia maro tamin’ny mpianany no nihemotra ka tsy niara-nandeha taminy intsony. 67 Dia hoy Jesosy tamin’ny roa ambin’ny folo lahy: Hianareo koa va mba te-hiala? 68 Simona Petera namaly Azy hoe: Tompo ô, hankany amin’iza moa izahay? Hianao no manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay. 69 Ary izahay mino ka mahalala fa Hianao no Ilay Masin’Andriamanitra. 70 Jesosy namaly azy hoe: Tsy Izaho va no nifidy anareo roa ambin’ny folo lahy, nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly? 71 Fa Izy nilaza an’i Jodasy, zanak’i Simona Iskariota; fa izy io no ilay efa hamadika Azy, nefa isan’ny roa ambin’ny folo lahy."
Inona no nitranga taorin’io fampianrana tao Kapernaomy io? (66). Maro no nihemotra, niala tsy ho mpianatry ny Tompo. Matetika rehefa misy zavatra tsy azo dia mahatonga antsika hiteny hoe marina ve izany? Midika tsy finoana izany: fahotana eo antrehan’Andriamanitra. Ny tena mpianatry ny Tompo dia mahafantatra sy manao fanekena tahaka an’i Petera (68-69). Mba avereno hoe ilay tenin’i Petera. Fantarao tokoa ve Jesosy Kristy Ilay hivavahanao? Mazotoa mamaky sy mianatra ny Teny satria ao amin’ny Soratra Masina no ampitombona ny finoana Azy. Tandremo ihany koa sao dia isan’ny mpamadika tahaka an’i Jodasy ka very anjara lova sy valisoa avy amin’i Jesosy.